[Ukara] Wondershare PPT2Video Pro: tọghata PPT ka Video
Tọghata PowerPoint ka video, na-echebekwa niile atụmatụ nke mbụ PPT na-adị mfe ịkọrọ ya niile na weebụ ma ọ bụ site obere ngwaọrụ.
Gbalịa Ọ Free N'ihi 32-bit Windows 7 / XP / Vista Buy Ugbu a
M na-atụ ụjọ na-eweta PPT, n'ihi na m maara na ọ bụrụ na ndị mmadụ mmasị na ya na chọrọ ọmụmaatụ ya mgbe e mesịrị, ha na-abịa arịọ m ka m ma ọ bụ m nnyemaaka maka dum slide oche na-eziga ha. Ugbu a, m tọghata ọ bụla na-video na-enuba ya na anyị na website ebe onye ọ bụla nwere nzi ohere. Nnọọ ngwá ọrụ.
- H. Wannamaker
Ngwaahịa a bụ ezigbo lifesaver. M hụrụ n'anya PowerPoint nke na-eme ngwa ngwa ọzụzụ ihe na akụkọ. Ugbu a, kama na-ekere òkè ọ bụla n'otu n'otu na narị ọrụ, ndị ahịa na ndị ọzọ nketa oke, m dị nnọọ tọghata ya FLV na ọ bụ na anyị na YouTube ọwa oge.
Ntak emi Họrọ PPT2Video Pro
Wondershare PPT2Video Pro Bụ ihe niile-na-otu PowerPoint ka video Ntụgharị maka Win (Windows 8 na-akwado). Ọ atọghata PowerPoint n'ihu ka fọrọ nke nta niile ewu video formats dị ka MPEG-1, MPEG-2, AVI, MP4, WMV, MOV, 3GP na HD videos. Na ya, i nwere ike conveniently Njirimara gị ná ahia-egosi, akaghị ndịna-emeputa dị ka dijitalụ signage, na-ụlọ ahịa ngosipụta, ma ọ bụ iji ya dị ka a video Podcast maka obere ngwaọrụ.
Ike Nchigharị Ikike
Tọghata ọ bụla PowerPoint ngosi ka video.
Ogbe tọghata ruo 12 PowerPoint faịlụ otu mgbe.
Na-niile animations, ikwu n'ụzọ, nsonaazụ ụda / audio, video & akomako.
Tọghata PPT to130 + preset mmepụta profaịlụ ke otu-click.
Mbupụ ukwuu dakọtara ndapụta na pụrụ n'ụzọ dị mfe bulite jidesie YouTube, Facebook, weebụsaịtị na blog.
Mfe iji, ọ dịghị kọmputa nkà chọrọ.
Customizable Video Ntọala
Gbanwee video ntọala gụnyere mkpebi, etiti ọnụego, na audio ikwesị ntụkwasị obi na-kpomkwem ịgbanwe video mma.
Tinye gị onwe gị logo ma ọ bụ watermark ka okokụre video, ịhazi gị PowerPoint ngosi maka branding na nwebisiinka nchebe.
Mee slide oge tupu akakabarede ma ọ bụ jiri mbụ oge ntọala gị PowerPoint ngosi mmịfe.
Tinye, akaghị, ma ọ bụ gbanyụọ ndabere na-ada n'ihi na gị ngosi.
Mgbe m ga-enweta ndị zara si Wondershare Nkwado mgbe m n'okpuru ndị tiketi?
Olee otú ibudata na wụnye Wondershare omume na Mac?
Olee otú ibudata na wụnye Wondershare omume na Windows?
Ka ikike na-arụ ọrụ na ma Windows na Mac version?
Olee otú iji tọghata PPT ka WMV
Olee otú Fanye YouTube Video n'ime PowerPoint
Olee otú Play PPT on iPhone 4S
3 Nzọụkwụ iji tọghata PPT ka QuickTime MOV Video
Olee otú Ekekọrịta PowerPoint on Facebook
A ọkachamara ajụjụ software wuru-ahapụ gị ike ma jikwaa gị ajụjụ ma ọ bụ nnyocha e mere, na soro na-arụpụta. Mụtakwuo
Ọkụ gị PowerPoint ngosi ka DVD ma ọ bụ tọghata gị PowerPoint ngosi mmịfe ka video maka mfe òkè. Mụtakwuo
Professional ihuenyo ndekọ software na ike edezi atụmatụ ime n'ihu, Nkuzi na demos. Mụtakwuo